トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "Ukufa", iqabane iimvakalelo?
bhula ukuya 3500 yen ngayo intsingiselo
umsebenzi abaxeli-mathamsanqa le "umvuni elibuhlungu" isikhundla umva ukufumana apreyizali free uyaphuma umlimi nomvuni mfiliba, abantu abaziva uloyiko asinto ingaqhelekanga. Noko ke, masenze qiniseka ukuba komvuni ebuhlungu ayikho nangayiphi na indlela amele ukufa.
"komvuni elibuhlungu" e
ukubhula, Toka kufika esiphelweni izinto, oko kuthetha ukuba isiphelo. Xa ukuhamba isiphelo ukuba akanakuba ukwenza wedwa, ukuba kukho kwakhona into yokuba imeko yakhe kwanelisa ecaleni injongo, koko kwakhona ufuna ukuphelisa ngokukhawuleza imeko yokuba inimba neentlungu.
Ukufa amakhadi, ezifana ngazo zonke iimeko, sinazo kuba kuza kufika esiphelweni ukugeleza indlela entsha. Enkulu ukuhamba, intando yabo namandla, kodwa nomzamo ukuba kusoloko nkqu, isibakala sokuba eli lomkhuba litshintsha, kwakhona kuthetha ukuba yalitshintsha lifikile.
ukuhamba isiphelo enkulu, kuba awukwazi ukuyeka nabani na, kunokuba kumzabalazo wokulwa isiphelo, ukwamkela isiphelo awushiye umzimba ukuba flow, okanye wazama ukuba babuyekeze ngaloo, khangela zonke ezikhoyo sokucela kusenokuba kuhle ukuba.
kwimeko apho iimvakalelo elinye iqela
Ukufa ikhadi yobume ezintle uthathwa ukuba intsingiselo "Ukufa" isigxina HIV, utyelelo luphawu lokuba kutyelela utshintsho kwi status quo, leyo ubuhlungu okanye kube buhlungu oko kuthetha ukuba. Ukuba
uthando, banjalo xa ithe eluthandweni lwakhe, ungakwazi thatha nkqu isiprofeto ukuba ukwahlukana naye nje mhlawumbi, na umntu othe basiva yengxakeko ngengqondo ibingengomcimbi enjalo indoda yakhe; kuya zinokujongwa ngengqiqo ukuba isiphelo uzayo intlungu.
Xa kwafika eli khadi ngaphandle, ngoko kude iimvakalelo zakhe ezithwaxe kuwe, oko ekugqibeleni ibonisa ukuba babuyele yokuqala yakho. nxi Beka ukuba sizana, apha ukuze baphile ngumbulelo ngeenxa eqaqambileyo nokukhangeleka iimvakalelo zakhe ngokukhawuleza.
Ukufa ikhadi kwindawo umva uthathwa ukuba intsingiselo "Ukufa" simi umva, ithetha ukuba look kwinto entsha kude inyathelo elinye ukusuka lwangoku unayo. Ukuba
uthando, iimvakalelo bakhe ezingafanelanga kakuhle kuwe ngebhadi. Kwaye yafikelela esiphelweni eluthandweni buhlungu ezingabuyekezekiyo, usenokuba ube ngcono okulungileyo emehlweni ayo omnye wesini esahlukileyo, kwimeko apho kukho ukuba baziva intlungu ulwalamano kunye naye, ekuphononongeni ulwalamano ngokwayo naye ngcono ukuba ubuyisele impilo entsha, ukuze abe plus kum.
likwazimisele nokugcina imeko ukuze umva ukuma ikhadi uphumile, akukhona ukukhetha bezizilumko flow enkulu wekamva. Hlola zonke umva ukuya kwindawo yokuqala, kufuneka ihanjiswe.